Ụgbọ elu nke mmadụ 6 nọ n'ime ya na -apụ n'anya na Far East nke Russia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » Ụgbọ elu nke mmadụ 6 nọ n'ime ya na -apụ n'anya na Far East nke Russia
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ụgbọ elu Russia Emergeny Ministry na -apụ n'anya radars gburugburu mpaghara Khekhtsir Nature Reserve na mpaghara Khabarovsk na Far East Russia.
Ụgbọ elu Antonov An-26 nke Mịnịsta na-ahụ maka ihe mberede Russia kwụsịrị na radars ụgbọ elu dị nso na Khabarovsk.
Ụgbọ elu ahụ nwere ndị ọrụ ụgbọ elu nke mmadụ isii nọ n'ụgbọ ahụ ma na -eme ụgbọ elu nka.
Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị na ihu igwe adịghị mma na -achọ mgbagwoju anya, dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi ozi si kwuo.
Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke Mịnịsta na-ahụ maka ihe mberede Russia gosipụtara na ụgbọ elu An-26 furu efu site na radars ụgbọ elu 38 kilomita (23.5 kilomita) site na ọdụ ụgbọ elu obodo Khabarovsk, gburugburu ókèala Khekhtsir Nature Reserve na mpaghara Khabarovsk na Far East Russia.
Ụgbọ elu ahụ nwere ndị ọrụ ụgbọ elu nke mmadụ isii nọ n'ụgbọ ahụ ma na -arụ ụgbọ elu teknụzụ, dị ka ọrụ mgbasa ozi si kwuo.
“N'elekere 11:45 nke oge Moscow, Ụlọ Ọrụ Na -ahụ Maka Nsogbu nke Mịnịsta Mberede Russia na mpaghara Khabarovsk natara ozi nke Antonov An-2Ụgbọ elu 6 gbapụrụ na radars ụgbọ elu 38 kilomita site na ọdụ ụgbọ elu obodo Khabarovsk, ikekwe na mpaghara Khekhtsir Nature Reserve. Dabere na data mbido, enwere ndị ọrụ ụgbọ elu nke mmadụ isii nọ n'ime ya, ”ụlọ ọrụ mgbasa ozi kwuru, na -agbakwụnye na ụgbọ elu ahụ na -eme ụgbọ elu teknụzụ.
Ozi ahụ gbakwụnyere, "Ọchịchọ na -agbagwoju anya site n'oge ọchịchịrị nke ụbọchị na ọnọdụ ihu igwe na -adịghị mma."
Ihe karịrị ndị nnapụta 70 na helikọpta nledo abanyela ebe a na -enyo enyo.
Ihe ọghọm metụtara ụgbọ elu dara ada n'ime ọhịa na n'ime ime obodo Russia Ebe Ọwụwa Anyanwụ ka bụ ihe a na -ahụkarị.
N'ọnwa Ọgọstụ, mmadụ asatọ nwụrụ mgbe helikọpta Mi-8, nke mmadụ 16 nọ n'ime ya, dara n'ime ọdọ mmiri dị na mpaghara Kamchatka nke ugwu mgbawa n'ihi adịghị ahụ anya nke ọma.
N'ọnwa Julaị, ụgbọ elu nke nwere ndị njem 22 na ndị ọrụ ụgbọ mmiri isii dara mgbe ọ na -achọ ịpụ na Kamchatka, na -ahapụghị onye ọ bụla.
Antonov An-26 (aha mkpesa NATO: Curl) bụ ụgbọ elu ụgbọ elu ndị nkịtị na ndị agha nke turboprop ejima, ahaziri ma mepụta na Soviet Union site na 1969 ruo 1986.
A na-arụkwa An-26 na-enweghị nkwekọrịta ikike na China site na ụlọ ọrụ Xian Aircraft dị ka Y-14, mechara gbanwee ka etinye ya na usoro Xian Y7.